Wayne Fette Barnaamijka Baadhitaanka iyo Kahortaga HIV
Wayne Fette wuxuu ahaa taageere hore oo dheer una doodi jiray adeegyada HIV / AIDS, isagoo bixiya mid ka mid ah goobihii ugu horeeyey ee baaritaanka HIV-ga ee bilaashka ah ee Ogunquit, Maine. Wuxuu sidoo kale si sharaf leh ufuuray calankii qaansoroobaad ee ugu horreeyay ee ka dhaca Ogunquit, Maine, si loo aqoonsado xuquuqda LGBTQ. Wayne wuxuu had iyo jeer tilmaamayay inuu wax ku biiriyo kana qayb qaato munaasabadaha sadaqada, kor u qaadista wacyiga iyo lacagaha loogu talagalay adeegyada muhiimka ah, oo ay ka mid yihiin Ogunquit's Spirit of Giving iyo The Southern Maine AIDS Walk. Wuxuu ku jiray guddiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin GLAD (Boston) iyo Xarunta Tayeynta Dhallinyarada ee Hilton-Winn Farm. Bulshadeenu waxay si xushmad leh u xasuusataa dhoola cadeyntiisa, diirimaadkiisa iyo deeqsinimadiisa, waxaana sharaf noo ah inaan xusno Barnaamijka ka hortagga.
HIV, Hepatitis C & Syphillis Tijaabada
Sababtoo ah dillaaca COVID-10, si ugu wanaagsan loo ilaaliyo kuwa aan u adeegno, ama kuwa halista ku jira, barnaamijka ka hortagga MA bixin doono baaritaanka socodka illaa ogeysiis dheeri ah. Waxaan hadda bixinaynaa xirmooyinka baaritaanka HIV-ga ee guriga oo bilaash ah oo si qarsoodi ah loogu soo diro albaabkaaga, ama inaan xafiiska ku qaadno ballan. Farriin qoraal ah ama wac 207.749.6818 si aad u diyaar garawdo, oo noo soo sheeg haddii aad jeceshahay inaan ku darno macluumaadka hagidda PrEP / PEP, qalabka galmada ee badbaadada leh, isku xirka baaritaanka cudurada galmada lagu kala qaado, ama adeegyada sarrifka ee saliingaha.
Barnaamijka Isdhaafsiga Sirinjiyada ee Magaalada Portland
Isdhaafsiga Syringe ee ay bixiso Isbahaysiga Caafimaadka ee Sinnaanta - Bangor, Ellsworth, Machias, Belfast
Maalgelinta dadweynaha ee aan helno waxaa loogu talagalay adeegyada iyo waxbarashada dadka halista ugu badan leh. Si kastaba ha noqotee, waxaan u aragnaa inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadeena siinta waxbarashada iyo baaritaanka kuwa doonaya inay ogaadaan sida ay isaga difaaci karaan HIV. Hawlahan waxaa lagu taageeraa oo keliya lacag ururin.
Waxbarashada bulshada ee HIV waxaa heli kara loo shaqeeyayaasha, iskuulada, ururada bulshada, kooxaha diinta, iyo hay'adaha kale. Xarunta Frannie Peabody waxay bixisaa soo bandhigid dhammaystiran oo ay ku jiraan mowduucyada kor u qaadista caafimaadka iyo macluumaad ku saabsan la-talinta iyo baaritaanka. Waan kula shaqeyn doonaa si aan ula jaan qaadno soo bandhigida si loo daboolo baahiyaha kooxdaada.
Si aad jadwal ugu sameyso afhayeen kooxdaada la xiriir Kahortaga 207.619.8013